‘पल शाहसँग बोल्न पनि डर लाग्छ’
काठमाडौं, ३१ भदौ – यतिबेला नेपाली चलचित्र ‘जोनी जेन्टलम्यान’ सिनेमाघरमा चलिरहेको छ । चलचित्र ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ को सफलतासँगै आफ्नो क्रेज फराकिलो बनाएका पल शाह र डेब्यु चलचित्र ‘नाइँ नभन्नु ल ४’ पछि चलचित्र जोनी जेन्टलम्यानमा देखिएकी आँचल शर्मा दुवैका लागि यो चलचित्रको सफलताको प्रतीक्षा छ ।
प्रेमी प्रेमिकाको भूमिकामा देखिएका पल र आँचलबीच रिल प्रेम मात्र नभएर रियल प्रेम पनि भएको हल्ला सिनेमावृत्तमा चलिरहन्छ । तर यी दुवै आपसी प्रेमबारेका हल्लालाई भने स्वीकार गर्दैनन् ।
‘हाम्रो बारेमा बाहिर विभिन्न हल्ला आइरहेका हुन्छन् । यस्ता हल्लाले फिल्मको प्रचारलाई फाइदा पुगेको छ’, आँचल भन्छिन्, ‘पहिले पहिले कफी गफ हुन्थ्यो । हल्ला चलेपछि चाहिँ बोल्न पनि डर लाग्छ ।’
फिल्म प्रचारका क्रममा एकसाथ भेटिएका पल पनि आँचलको कुरामा हो मा हो थप्दै भन्छन्, ‘फोनमा बोल्दा पनि कसैले ट्रयाक गरिरहेको छ कि भनेर बोल्न डर लाग्छ आजकल त ।’
यसो भन्दै गर्दा उनीहरूबीच हाँसोको फोहरा छुट्छ ।
त्यसो त पल र आँचलको सम्बन्ध घनिष्ठ छ ।
दुवैजना साथै हुँदा पनि आँचललाई भन्दा पललाई नै फलो गरिहेका हुन्छन् कति फ्यानले त । चलचित्रको शूटिङका क्रममा पलको फ्यान फलोइङ देख्दा अचम्मै लागेको रहेछ आँचललाई । शूटिङका क्रममा भारतका कतिपय स्थानमा पुग्दा पललाई चिन्ने दर्शक देख्दा आँचलले सोचेकी थिइन्, ‘मैले पनि राम्रो काम गरें भने यस्तै फ्यान फलोइङ कमाउँछु होला ।’
आँचलको कुरा सुनेर पल मुस्कुराउँदै थप्छन्, ‘भारतको गुवाहाटीमा मलाई सुरक्षाका लागि पाँच बडीगार्ड नै चाहियो । भारतमा पनि नेपाली कलालाई माया गर्ने दर्शक धेरै हुनुहुँदो रहेछ ।’
चलचित्र ‘जोनी जेन्टलम्यान’ भारतका विभिन्न स्थानमा पनि शूटिङ गरिएको छ । ‘त्यहाँका दर्शकले नेपाली सिनेमामा आफ्नो भू–भाग देख्दा कति रमाइलो मान्नुहुन्छ होला,’ पल थप्छन्, ‘हाम्रो सिनेमा बजारको विस्तारमा पनि राम्रै फाइदा हुन्छ जस्तो लाग्छ ।’
पल र आँचलको नाम जोडिनुको अर्को कारण यी दुईले केही म्युजिक भिडियो र फिल्ममा समेत सँगै काम गर्नु पनि हो । फिल्मी अनुभवमा त आँचलले स्क्रीन शेयर गरेको नै पलसँग मात्र हो । आँचल भन्छिन्, ‘काम गरिसकेको भएर होला, पलजीसँग काम गर्न सहज लाग्छ ।’
फिल्म जोनी जेन्टलम्यानबारे पल र आँचलको एउटै भाका छ, ‘चलचित्र प्रेमकथा नै हो । यसमा आकर्षण थप्न कमेडी र एक्सन पनि छ ।’ अर्थात्, फिल्म मसालेदार छ ।
प्रेमकथामा मात्र अभिनय गरेका पल र आँचल यसलाई दर्शकको मागका रूपमा बुझ्छन् । ‘अहिले दर्शकले मलाई प्रेमकथामा हेर्न चाहनुहुन्छ, भोलि फरक भूमिकामा पनि काम गर्छु,’ पल भन्छन् ।
सोसियल वर्कमा ब्याचलर गरिरहेकी आँचलका लागि पनि यो फिल्म विशेष छ । पढाइमा अब्बल आँचललाई परिवारको साथ त छ नै, सकभर राम्रो फिल्ममा मात्र काम गर्ने सोच छ उनको । भन्छिन्, ‘लामो समयपछि फिल्ममा आएकी छु, दर्शकले पक्कै साथ दिनुहुनेछ ।’
बेलाबेलामा मिडियाले नाम जोडिदिँदा भने पल र आँचल दुवै दिक्क लाग्ने बताउँछन् । मिडियाले गर्दा अहिले काम परेर भेट्दा पनि धेरै विचार गर्नुपरेको आँचल सुनाउँछिन् ।
‘वर्षौंदेखि यही प्रश्न सोधिरहँदा हामीलाई मात्र होइन, अहिले त दर्शकलाई पनि दिक्क लागिसक्यो,’ पल भन्छन् ।
अक्षय–करीना स्टारर 'गूड न्यूज'ले अहिलेसम्म कति कमायो ?
नोरा फतेहीले इन्स्टाग्राममा राखिन् बोल्ड तस्वीर
रेड कार्पेटमा छाए प्रियंका र निक, भाइरल भयो तस्वीर...
आजकल बलिउड फिल्ममा कहाँ छ मायाप्रेम ?
कोरोनाको त्रास, रसुवागढी-केरूङ सीमा क्षेत्रमा आवतजावत बन्द